साहित्य | We Nepali
नेपालको समय: ११:०२ | UK Time: 06:17
बेलायतको पिआरले टुटेको सम्बन्ध…
अर्को हप्ता मनोज आउने…कस्तो भयो होला, यत्रो लामो समयसम्म बिदेशमा बसेको पहिलाको भन्दा नि राम्रो भयो होला है ? मोटाएको होला कि दुब्लाएको । मलाई माया गर्छ कि नाई…भेट्नी बितिकै के गर्ला । अनि...
पारिवारिक वियोगमा पनि देवकोटाको साहित्यिक योगदान अतुलनीय
काठमाडौँ, २ कात्तिक (रासस) – नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात्...
मजगैयाँको विद्रोह, त्याग र पृष्ठभूमिको त्रिबेणी ‘धर्तीमाता’
बाल्यकालदेखि करिब तीस बर्षसम्मको परिवेश, आक्रोस, घटनाक्रम लगायत परिवारको इतिहासलाई साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ बलदेव मजगैयाँले भर्खर प्रकाशित आत्म आख्यान कृति ‘धर्तीमाता’ मा सटिक तबरले प्रस्तुत गरेका छन् । सात बर्षको उमेरमा आफ्नी आमा गुमाउनुपरेको...
बेलायत । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले स्थापनाको दशौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । हाईवेकमस्थित रोयल एयरफोर्स क्याम्पमा आयोजना गरिएको समारोहलाई प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो । उक्त समारोहमा युनिभर्सिटी...
प्राण जाने बेला पनि बालाई पानीसम्म खुवाउन पाइएन
मेरी आमा भन्नु हुन्छ म सानै देखि धेरै दुःख पाएर हुर्केको रे । म जन्मिनु भन्दा केही महिना अघि मात्रै घरको हजुरबा हजुरआमाको स्वर्ग बास भएको रहेछ अनि म जन्मे लगत्तै बाको दाजुभाई छुट्टिनु...
सधैँझैँ खाना खाएर कोठा फर्किदा रातको नौ बजिसकेछ । गेटमा चाबी झुन्डिसकेको थियो अघि नै । घरबेटी दिदी माइती जानु भएको रहेछ । यसैले मुनीको फ्लाटमा बस्ने राजन दाइ, गीता भाउजुले चाँडै आफ्नो सुरक्षाको...
कविता आज एउटा लाग्ने कुरा भोलि अर्कै लाग्ने मनमा आउने कुरा आउने र जाने यहाँ कुनै कुरा स्थायी नहुने । मन त मन नै हो मनले जित्यो स्वामित्व लिने मन फेरी मोडिन बेर...
बेलायतमा मनाइयो भानु जयन्ती
लन्डन । बेलायतको होलपार्क बगैँचामा भिमु मेमोरियल ट्रष्ट नेपाल र विश्व साहित्य महासंघ बेलायतको संयुक्त आयोजनामा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०४ औं जन्मजयन्ती मनाइयो । साहित्यकार तथा समाजसेवी घन थापा मगरले आदिकवि भानुभक्त अचार्यको तस्वीरलाई खादा...
लण्डन । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेलायत च्याप्टर र विश्व साहित्य महासंघ साउथ युकेको संयुक्त आयोजनामा दोश्रो वातावरण कविता गोष्ठी लण्डनमा सम्पन्न भएको छ । गत आइतबार चाल्टर्न एफसी हलमा भएको सो कार्यक्रममा गत...
एकैसाथ ‘बस्ती’ र ‘बयान’ लिएर आए घन थापा
लण्डन । कवि तथा समाजसेवी घन थापा मगरको दुई एल्वमहरु “बयान” र “बस्ती” आइतबार एकैसाथ सार्वजनिक भएका छन् । फोल्कस्टोनस्थित हकिन्ज कम्युनिटी हलमा करिब चारसय सहभागीहरुबीच बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र...
आमा, आहा कति मिठो शब्द, कति प्रिय लाग्ने शब्द ! तर, यो शब्दको उच्चारण गर्ने बित्तिकै मेरो मन त्यसै भावुक हुन्छ । मलाई मेरी आमाको याद आउँछ । मेरी आमा जो सहनशीलताको प्रतिक हुनुहुन्थ्यो,...
काङमाङ नरेश राईको ‘पप्पी फूल’ मा बहस
लन्डन । काङमाङ नरेश राईकृत कविता संग्रह ‘पप्पी फूल’माथि वहस भएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित कृतिको विमोचन समारोहसँगै यसमाथि बहस गरिएको हो । विमोचनपश्चात पत्रकार, लेखक दीपक सापकाले सहजीकरण गरेको विमर्श कार्यक्रममा...
« अघिल्ला 1 …34567… 13 पछिल्ला »